Angry Jokes in Nepali - Nepali Me
Nepali Jokes (Nepali Chutkila)
Angry Jokes in Nepali
प्रेमी : हैन तिमीले यो छोटो लुगा घरमा लगाउँदा तिम्रो बाबाले गाली गर्नु हुँदैन ?
पे्रमीका : बाबाले त होइन आमाले चाहीँ गर्नुहुन्छ ।
प्रेमी : बाबाले नगर्नी, आमाले चाहीँ किन गर्ने नि?
प्रेमीका : आमाले, उहाँको लुगा अरुले लगाको देख्नै सक्नुहुन्न ।
( प्रेमी त ट्वा 🙉🙉🙉🙉🙉पर्यो )
( बुढीले बुढालाई भन्दै )
बुढा : हेरन बुढा, मलाई त्यो मान्छेले घूरी-घूरी फर्किफर्की हेर्दै छ ।
हाकुकाले : ठिकै छ नि! त्यो कबाडीवाला हो, कबाडी माल हेर्ने तेस्को बानी नै हो ।
बुढी पुरै रिसले चुर भयो
केही पनि टिपेन
( परीक्षा हलमा एउटा विद्यार्थी शिक्षकको टुप्पी तानिरहेको थियो । यो देखेर शिक्षकले रिसाउँदै भने )
शिक्षक : ए केटा ! किन मेरो टुप्पी तानिरहेको छस् तँ ?
विद्यार्थी : मेरो दिमागले केही पनि टिपेन । त्यही भएर सर ।
शिक्षक : टुप्पी तानेरचैँ टिप्छ त तेरो गोबर भरिएको दिमागले ?
विद्यार्थी : ह्या सर पनि ! किन नटिप्नु त, रेडियोको एन्टिना तानेपछि कति राम्रोसित टिप्छ ।
( शेरे कार 🚗धोइरहेको रैछ । त्यत्तिनै बेला एउटा अन्टी त्यहाँ आइपुगेछ र भनेछ )
अन्टी : कार धोइराको हो भाई ?
( शेरे लाई रिस उठेछ र भनेछ )
शेरे : हैन पानी खुवाइराको हो । पछि बढेर बस 🚌हुन्छ कि भनेर ।
(बाउले छोरालाई रिजल्ट अगाडी)
बाउ : हेर छोरा ! तँ यसपाली पनि परिक्षामा फेल भइस् भने मलाई बाउ नभन्नु । बुझिस 😠
(भोली पल्ट रिजल्ट आएपछि)
बाउ : ए छोरा ! तेरो रिजल्ट के भयो भन ?
छोरा : यो हरि बहादुर कति जिस्केको भनेको। रिजल्टमा फेल भएर टेन्सन भइरहेको बेला । 😉😉😉😉😉😉😉😉
कस्तो देखेको छ ?
(पार्टीमा जानुअघि बुढीले नयाँ सारी लगाएर)
बुढी : मलाई यो पाहेैलो सारीमा कस्तो देखेको छ ?
बुढा : ठ्याक्कै तोरी बारीमा भैँसी 🐄चरेको जस्तो देखेको छ ।
(बुढीको हातबाट दरो कुटाई 👋🔨खायो बुढाले)
पहिलो पटक गाडी चढेको
शेरे पहिलो पटक गाउँ बाट शहर गयो । पहिलो पटक उ गाडी 🚌चढेको भएर बसको चालकले गाडी चलाएको हेरेर बस्यो । पछि बिच बाटोमा खाजा खान सबै गाडी बाट ओल्र्यो, तर शेरे र्ओलेन । पछि चालक फर्केर गाडी चलाउन खोज्दा त गाडीको गियर नै भाचेँको देख्यो ।
त्यो देखेर बस चालक रिस ले चुर भएर कराउँदै भन्यो–“कसले भाँचेको हो यो ?”
अनि शेरेले पनि ठूलो स्वरमा फुर्तीको साथमा “मैले भाँचेको हो” भन्यो ।
अनि चालकले किन भाँचिस भनेर सोध्दा,
शेरेले भन्यो–“ बस चलाउन सुरु गरेदेखिनै तपाईले यसलाई घरी यता घरी उता धकेलेर भाच्न खोज्नुभाको थियो । तपाईले त सकेन त्यै भएर मैले त एकै पटकमा भाँचीदिए ।”
(शेरेले धोबी कुटाइ 🔨खायो)
कुन ठाउँ बाट ?
(बुढाले आफ्नो बुढीलाई)
लोग्ने : तिमीलाई एक ठाउँबाट हेर्दा, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ ।
स्वास्नी : (खुसी हुँदै) 🙌 कुन ठाउँ बाट ?
लोग्ने : टाढा बाट । 😉😉😉😉
( स्वास्नी खुब रिसाई )
शेरे एकदिन बाटोमा घुम्दै थियो । उसले पर तिर एउटा भित्तामा केहि लेखिएको जस्तो लाग्यो र त्यँहा गएर के लेखेको रहेछ भनेर पढ्दा त, उनि दँग परे । त्यँहा लेखिएको थियो कि “पढ्ने मान्छे गधा हो ।”
उसलाई निकै रिस😡 उठ्यो र त्यो मेटेर लेख्यो कि “लेख्ने मान्छे चाँही गधा हो ।🤪🤪
पोडी खेल्न आउँछ ?
( राम र श्याम कुरा गर्दै )
राम : ओइ श्याम, तिमीलाई पौडी खेल्न आउँछ ?
श्याम : मलाई त आउँदैन नी ।
राम : 😆(हाँस्दै) तेती पनि आउँदैन तिमीलाई । बरु कुकुरलाई 🐕 राम्रोसगँ आउँछ ।
श्याम : 😠(रिसाउँदै) त्यसोभए तिमीलाई चैँ आउँछ त?
राम : (खुसी हुँदै) मलाई त मज्जाले आउँछ ।
श्याम : तेसो भए कुकुर र तिमीमा के फर क भयो र ?
😉😉😉😉😉श्याम दङ्गै प¥यो 😉😉😉😉😉
(अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकलाई केटाले छुट्टि भएपछि सोध्यो)
सर : नटुरेको अर्थ के हो ?
शिक्षक : नटुरे ? उसको प्रश्नले शिक्षक अकमक्क परे । कुरा टार्न उनले भोलि भनौँला भने । उनले त्यो रातभरि पूरै डिक्सनरी अध्ययन गरे तर नटुरे शब्द कहीँ भेटेनन् ।
(भोलिपल्ट त्यो केटाले फेरी स्कुल छुट्टि भएपछि बाटोमा सोध्यो)
केटो : सर, नटुरेको अर्थ आज भन्छु भन्नुभएको होइन ?
त्यो दिन पनि शिक्षकले उत्तर भन्न सकेनन्, कुरा टारे । यसरी त्यो केटाले दिनदिनै त्यही प्रश्न सोधेर हैरान पारेपछि शिक्षक लाजले अर्कै बाटो हिँड्न थाले । तर, एकदिन केटाले शिक्षकलाई भेट्यो र फेरी त्यही प्रश्न सोध्यो ।
(दिक्क हुँदै शिक्षकले उसलाई सोधे)
शिक्षक : नटुरेको यसको स्पेलिङ के हुुन्छ ?
केटो : nature ।
शिक्षक : (रिसले चुर हुँदै) गोरु ! मलाई बेकुफ बनाइस् हैन ? नेचरलाई नटुरे भनेर मेरो ज्यान खाइस् । प्रिन्सिपललाई भनेर अब तँलाई स्कुलबाट ननिकाली छाडेदिनँ ।
केटो : (शिक्षकको खुट्टा समातेर रुँदै) सर प्लिज, तेसो नगर्नुस् मेरो फुटुरे(future) खराब हुन्छ ।